Aoka ny samy Malagasy no andinika ny raharaham-pirenena
lundi, 07 mai 2018 11:37
Korontana sy krizy ambolena vokatry ny fomba fanaovana politika feno kolikoly sy tsy maty manota eto amin'ny firenena hatrany no iainan'ny Firenena ary zakain'ny Malagasy, ny tokatrano, ny mpandraharaha.
Ireo mpanakorontana, ireo tia fahefana, ireo tia vola hatrany koa anefa avy eo no miseho andamina, ary fatra miantso sy misolelaka amin'ny vahiny.
Taiza ireo mpanao politika na ireo vahiny ireo no tsy nisy niteny tamin'ny fandikan-dalàna, ny kolikoly, ny halatra eto amin'ny firenena, ny fanamparam-pahefana sy ny fidangan'ny fiainana ary ny fahorian'ny Malagasy no izao vao mody tsara resaka.
Ho avy indray izao ny fandravana ny governemanta, dia hiseho lany eo avokoa ireo mpitaty rakena rehetra, ilaza fa avy amin'ny fikambanana atsy, na antoko eroa, na zana-drazana atsy, na foko eroa.
Ampivorivorian'ny vahiny an-databatra boribory, dia omen-kanina amina hotely lehibe, dia hifanao sonia fa dia hihavana toy ny mpirahalahy, hiraina ny hira fivavahana, asiana ny vavaka iraisana, dia hiraina ny hiram-pirenenena dia mifanoroka ao avokoa ka lazaina fa samy Malagasy no nahita marimaritra iraisana.
Dia asa vita indray ny fifidianana dia hifampihantsy ady idray, hitarika olona ho vonoina indray, dia izany hatrany no hita eto.
Raha tena tia Tanindrazana tokoa, dia aoka hikisaka ireo fanetribem-pirenena, aoka tsy hikasika raharam-pirenena intsony ireo izay nangalatra, namono olona ary namoafady teto amin'ny Firenena.
Isika Malagasy ihany koa, aoka hiala amin'ity kolikoly politika ity, kolikoly ireny fanekentsika hifidy olona amin'ny alalan'ny tee-shirt sy fotsim-bary ary fety aman-danonana ireny, kolikoly ny antsika mpanao gazety tia kely, ka na olona hita fa amono Firenena sy hivarotra Tanindrazana dia mbola tohanana satria manome vola sy felaka, nefa isika ihany avy eo no mimenomenona sy feno tsikera amin'ilay mpitondra voafidy nivarotra Tanindrazana.
Tadidio, fa raha ianao marina no mifidy izay olona tianao anatateraka ny tetikasa mazava arosony anao, dia ianao no Patron-ny, ka rehefa tsy manatateraka ny asa nampanaovinao azy izy, dia azonao esorina, fa raha ny vahiny no mametraka sy mamatsy vola ny mpitondra iray, dia faralahin'ny eritreriny ianao fa ny mpamatsy vola azy no patron-ny.
Tsy marina amiko ny filazana, fa rehefa ny Malagasy ve no tsy ahay hifandamina, ka ahoana ny tsy hiditra ny vahiny, na koa ny hoe ny vahiny aloha hatreto no mamatsy vola antsika ka tsy maintsy miditra an-tsehatra izy ireo, na ihany koa ny hoe faritra ao anatin'ny iraisam-pirenena isika ka tsy afaka ny hikatona irery. Firenena mahaleo tena isika, ary izany no mila ijoroantsika mba tsy am-bava fotsiny izay fahaleovan-tena izay. Aoka ampiarina ny Lalàna misy eto amintsika dia voavaha io olana io. Manana Fitsarana isika, aoka hiasa ara-pahamarinana izany Fitsarana izany.
Izaho manokana dia tsy hanatrika izay dinika tarihin'ny vahiny, ary raisiko toy ny mpivarotra Tanindrazana izay mpanao politika miditra amin'izany, ka dia tsarain'ny tantara, iza no tena mpamadika sy mpivarotra Tanindrazana eto.